किन भयो आन्दोलनकारीहरूमाथि लाठीचार्ज? – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsकिन भयो आन्दोलनकारीहरूमाथि लाठीचार्ज?
किन भयो आन्दोलनकारीहरूमाथि लाठीचार्ज?
September 8, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News, दार्जीलिङ 0
दार्जीलिङः दार्जीलिङ पुलिसले आज यहाँको चौकबजारमा जनसभा सुनिरहेका गोर्खाल्यान्ड समर्थकहरूमाथि अचानक लट्ठीचार्ज गऱ्यो। कैयौं राउण्ड टीयर ग्यास पनि पड़्काएर जनसभा लथालिङ्गै बनाइदियो। यस अवसरमा कैयौं गोजमुमो समर्थकहरू घाइते भएका छन् भने गोजमुमो समर्थकहरुले फ्याँकेको ढुङ्गा लागेर एकजना पुलिसकर्मी पनि घाइते भएको जानकारी पाइएको छ।
स्मरण गराइन्छ, गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनस्वरूप गोजमुमो र क्रामाकपा समर्थकहरुले लगभग3महीनादेखि दैनिकरूपमा दार्जीलिङमा जुलूस निकालेर चौकबजारमा जनसभाको आयोजना गरिरहेको छ। यसै क्रममा आज पनि हजारौं गोर्खाल्यान्ड समर्थकहरुले यस जुलूसमा सहभागिता जनाएका थिए अनि उनीहरुले सधैं जस्तै रेलवे स्टेशनबाटै जुलूस निकालेर गोर्खाल्यान्डको समर्थनमा नारा लगाउँदै शहरको परिक्रमा गरेका थिए।
शहरको परिक्रमा गरेपछि यो जुलूसले चौकबजारमा एक जनसभाको रूप लिएको थियो। तर आज चौकबजारमा जुलूस आइपुग्नअघिनै यहाँ लगभग 20-30 जना पुलिसकर्मीहरु तैनाथ थिए। जुलूस चौकबजारमा आएर जनसभा शुरू भयो, जनसभामा दार्जीलिङ नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 23 की नगरपार्षदिका प्रतिभा राईले सम्बोधन गर्न शुरू गरिन्।
गोजमुमो, क्रामाकपा अनि गोर्खाल्यान्डका आधासरो समर्थकहरु चौकबजारको मूल सड़कबीचमानै बसेका थिए अनि धेरैले उभिएरनै जनसभा सुनिरहेका थिए। तर अचानक पुलिसले यी गोर्खाल्यान्ड समर्थकहरुमाथि लट्ठीचार्ज शुरू गरेपछि उनीहरु छताछुल्लै भए अनि पुलिसमाथि पनि गोजमुमो समर्थकहरुले ढुङ्गा हिर्काउन शुरू गरेका थिए। यसपछि पुलिसले टीयर ग्यास छोड़्न शुरू गरेको थियो।
पुलिसको यस्तो कार्वाहीमाथि क्रामाकपाले कठोर शब्दमा आलोचना गरेको छ। क्रामाकपा प्रवक्ता गोविन्द छेत्री र केन्द्रिय समिति सदस्य शेखर छेत्रीले एकै स्वरमा भने-दार्जीलिङ पहाड़मा गणतान्त्रिक ढङ्गमा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन भइरहेको छ, यसैअनुरूप गोजमुमो र क्रामाकपाले दैनिकरुपमा गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनको मागमा जुलूस निकालेर जनसभा गरिरहेको छ। तर पुलिसले जनसभा सुन्न बसिरहेका जनतामाथि बर्बरतापूर्वक लट्ठीचार्ज गरेको छ, टीयर ग्यास छोड़ेको छ।
बंगाल सरकारले गोर्खाल्यान्डको यस गणतान्त्रिक मागलाई बर्बरतापूर्वक दबाउने प्रयास गरिरहेको छ। गोर्खाल्यान्डको मागमा आवाज पनि उठाउन नपाउने भइसक्यो। यसप्रकारको घट्नाको सम्पूर्ण जनताले विरोध जनाउनेछन्। यस घट्नामाथि सीबीआई वा न्यायिक जाँच हुनपर्ने पनि माग गरेका छन्। यसरीनै गोजमुमोबाट बहिष्कार भएका विनय तामाङले पनि जनसभा स्थलमा गोर्खाल्यान्ड समर्थकहरुमाथि भएको लट्ठीचार्जको कठोर शब्दमा विरोध जनाएका छन् भने दार्जीलिङका विधायकले पनि यस घट्नामाथि उच्च स्तरीय जाँच हुनपर्ने माग गरेका छन्।
यसबारे पुलिसले भनेको छ-दार्जीलिङ पहाड़मा गोर्खाल्यान्ड समर्थकहरुले प्रशासनबाट अनुमति नलिईनै जनसभा गरिरहेका छन्, अनुमतिबिना कसैलाई पनि जनसभा गर्न दिइनेछैन। यसैले आज चौकबजारमा जनसभा गर्न नदिइएको हो। पुलिसले आज गरेको यस कार्वाहीपछि भोलि दार्जीलिङमा अझै बेसी गोर्खाल्यान्ड समर्थकहरुले जुलूस निकाल्न सक्ने अनि जनसभा गर्नसक्ने सम्भावना छ। किनभने, गत केही दिनअघि पनि जनसभा अवधिनै पुलिसले यस्तै कार्वाही गरेको थियो। तर त्यसको ठीक भोलिपल्ट व्यापक संख्यामा गोर्खाल्यान्ड समर्थकहरु सड़कमा ओर्लिएका थिए अनि चौकबजारमा बिना अनुमतिनै जनसभाको पनि आयोजना गरेका थिए।
सिङ्ला र बेनेकवर्णबाट विष्फोटक उद्धारः 8 गोजमुमो कार्यकर्ता विरूद्ध मुद्दा
गृहमन्त्रीले दिए केवल आश्वासनः म एकपल्ट मुख्यमन्त्रीसित त्रिपक्षीय वार्ताको लागि कुरा गर्नेछु- राजनाथ